Maxkamad ku taalla London oo xukun ku riday Labo haween oo dilay Haweeney Somali ah. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maxkamad ku taalla London oo xukun ku riday Labo haween oo dilay Haweeney Somali ah.
Maxkamadda Old Bailey ee magaalladda London ayaa la soo taagay labo Haween oo lagu kala magacaabo Kinsi Caydiid iyo Magdalana Agathine, kuwaasi oo lagu soo oogay inay si wadajir bishii September 17-dii ee sannadkii hore u dileen Marxuumad la oran jirey Xamdi Jimcaale oo 27-jir ah.
Eedeysanayaasha oo 21-jirro ah ayaa la sheegay inay Marxuumadda ku dhex dileen guri ku yaalla Waqooyiga magaalladda Londdon, kadib, markii uu muran soo dhex galay.
Eedeysanayaasha oo mid Somali tahay, midna aan la sheegin dalka ay u dhalatay ayaa la sheegay inay si xun u jir-dileen Marxuumadda, taasi oo u geeriyootay dhaawacyo ka soo gaaray Madaxa iyo qeybaha kale ee jirkeeda.
Boliska waxay sheegeen in ay saddexdaasi haween markii ugu horreysay Dhismahaasi tageen 4 maalmood ka hor inta aan la helin maydka Marxuumadda.
Dadka deriska oo goob joog ahaa falkaasi ayaa sheegay inay arkayeen Kinsi Caydiid oo meel ka baxsan Dhismaha ku garacaayso Marxuumadda ilaa ay ka geeriyootay.
Baarayaasha ayaa xaqiijiyey in Xamdi Jumcaale ku geeriyootay gacanta Kinsi Caydiid iyo Magdalana Agathine, inkastoo ay ka been sheegeen qaabka uu dilku u dhacay.
Garsooraha Maxkamadda waxa uu Eedeysanaha Koowaad ee Kinsi Caydiid ku xukumay Xabsi daa’im oo u dhiganta ugu yaraan 15-sanno, halka Eedeysanaha Labaad ee lagu magacaabo Magdalana Agathine lagu xukumay Xabsi 9 sanno ah.
(FAALLO): Maxaa ka soo bixi kara Shirka Hoggaamiyayaasha Madasha Wada-Tashiga Qaranka ?